Ekebe akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nke ụmụ nwanyị - nke kpochapụla, nke a na-eji akwacha, na ihe mkpuchi, mkpuchi, aji, ihe kacha mma na uwe, jeans
Na-acha akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ - ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ụta nke ọma?
A na-atụle jaket akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ dị ka ihe eji eme ka ndị inyom na-akwagharị. Ọbụna ndò dị otú ahụ gbara ọchịchịrị na ọchịchịrị adịghị eme ka ngwaahịa a bụrụ ihe na-agwụ ike na enweghị nchekwa - na nke ahụ, ọ nwere ike ịgbanwe ọdịdị nke onye nwe ya n'ụzọ dị ịrịba ama ma gbanwee onyinyo ya ọhụụ na-enweghị ncheta.
Nwaanyị akpụkpọ anụ
Enwere ike ime jaket akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ ọ bụghị naanị site na ezigbo akpụkpọ anụ, kamakwa site na ngwaọrụ ndị ọzọ, dị ka nubuck ma ọ bụ edozi. Na mgbakwunye, taa, jiri nlezianya na-eji ihe ndị e ji eme ihe, na-eṅomi ihe ndị e kere eke nakwa na ọ dị iche na ha site n'àgwà na àgwà ndị dị mma.
Na nchịkọta nke ụdị ejiji na oge ọ bụla enwere ọtụtụ ụdị dị iche iche na-egbuke egbuke ma dịgasị iche iche nke dị iche iche na mkpụmkpụ, ogologo na igbu egbu. Ya mere, ụmụ agbọghọ na-achọkarị ọdịiche dị mkpirikpi, ndị na-agbakwụnye, ụyọkọ, mpempe akwụkwọ na ngwa. N'aka nke ọzọ, ụmụ nwanyị tozuru etozu na-ahọrọ ogologo oge ha na ejiji ajị anụ.
Black akpụkpọ anụ mkpuchi jaket
N'okpuru jaket-kosuho ghọtara ihe nkenke dị mkpirikpi na mkpọchi ahụ, nke dị diagonally. Ngwaahịa a na-ewu ewu na uwe elu nke ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ ndị na-achọsi ike ịmepụta ihe ndị mara mma, ndị na-egbuke egbuke na ndị mara mma. A na-ejikọta jaket akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nke ụmụ nwanyị na jeans, uwe ajị anụ, akwa ákwà na ihe ndị ọzọ, yana ụdị akpụkpọ ụkwụ dị iche iche na ngwa ngwa dị iche iche.
Obere akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na mkpuchi
Nwa akwa akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ nke ụmụ nwanyị na-ekpochapụ mkpa ọ dị iyi uwe. Ka ọ dị ugbu a, ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-ejikọta akụkụ a n'ụzọ dị mma, na-enye nkasi obi na nchebe site na ifufe na ọdịda. A na-acha akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-ekpo ọkụ, nwanyị na mara mma.
Karịsịa a na-ewu ewu n'etiti ụmụ nwoke na-enwe mmekọahụ na-eme ka ụdị anụ ọhịa na-agba anụ - raccoon, fox Arctic, fox na ndị ọzọ. Ọkpụkpọ anụ ahụ na-enye ndị a ngwaahịa dị oke mma, nụchaa ma nụchaa, na-eme ka ha dị mma maka ịkwalite azụmahịa, ihe nkiri ịhụnanya ma ọ bụ ihe mgbede.
Nwa obere akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ
Ụdị ndị dị mkpirikpi na-ewu ewu na ụmụ agbọghọ na-eto eto na-eto eto, bụ ndị na-amasị igosi ndị gbara ya gburugburu ihe ndị na-adọrọ adọrọ nke ọnụ ọgụgụ ha. Ihe ndị dị otú ahụ nwere ike ịnwe ọdịiche dịgasị iche iche - jaket na-acha akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-ekpo ọkụ maka mmiri na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ọkọchị, onye na-eto eto jaket na ndị na-agbanye mgbanwụ, ihe nlereanya na-ekpo ọkụ na njedebe site na aji na ọtụtụ ihe.
Ihe kachasị mkpa nke ihe ndị dị n'èzí bụ na ha anaghị eme ka ọkpụkpụ na-agbagha, ha anaghịkwa egbochi ya mgbe ha na-anya ụgbọ ala, n'ihi ya, ndị na-agbanye ndụ na ndụ ụgbọ ala na-ahọrọkarị ha. Tụkwasị na nke a, jaket akpụkpọ anụ nke ụmụ nwanyị na-enye ụmụ agbọghọ aka igosi mma nke uwe ekike, bụ nke ọtụtụ na-ezobe jaket na-ekpo ọkụ.
Na-acha odo odo akpụkpọ anụ na akpaaka
Otu ụzọ esi eji ezigbo akpụkpọ anụ mee akwa mma, bụ nke nwere ike inye ngwaahịa a dị nro ma ọ bụ nwee obi ike ma ọ bụ obi ike ma ọ bụ dị mma. E nwere ike ịmepụta ihe ndị nwere ike ịme n'elu dum nke ihe ahụ ma ọ bụ bụrụ nanị obere akụkụ, dịka ọmụmaatụ, uwe aka. Ndị na-emepụta ụdị onyinye Givenchy, Carven na Christopher Kane na-eji usoro a eji mma eme ihe. Ya mere, n'ahịrị nke Carven, a na-enye jaket akpụkpọ anụ na-acha ọcha na nke na-acha akpụkpọ anụ na-achacha akpụkpọ anụ, nke na-emeri obi ndị agbapụ nke oge ahụ.
Agba akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na aji
Nwa nwanyị akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na aji na-egbuke egbuke ma mara mma. Otutu, ihe ndi ozo na ihe ndi ahu di na nchikota na ebe ndi ozo, ma o di. Tụkwasị na nke ahụ, ụdị ihe oyiyi ndị mbụ ahụ na-eji akpa ma ọ bụ ihe e ji esiji na-emepụta, bụ nke na-adịbeghị anya dị mkpa maka ndị na-eto eto. Iji chọọ ụdị ngwaahịa ndị a, a na-eji ajị anụ dị iche iche mee ihe, ma ihe kachasị mma ma ọ bụrụ na ọ dị mma na-acha akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-adị n'osisi nke nkịta ọhịa ma ọ bụ fox.
Na-akpụ akpụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ
Ụdị "pilot" ma ọ bụ "onye ọhụụ" ruo n'oge na-adịbeghị anya bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu na United States na Canada, Otú ọ dị, ndị inyom ejiji ejiji ogologo oge apụghị ịghọta ụdị mma nke nsụgharị a nke ụmụ nwanyị. Ka ọ dị ugbu a, maka ọnọdụ taa, ọnọdụ ahụ agbanweela, ụmụ agbọghọ na-asụ asụsụ Russian nọkwa ebe nile na-eyi ndị na-anya ụgbọ mmiri na ihe ndị dị iche iche.
Na oge oyi, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, nke a na-eji akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ ma ọ bụ na-acha akpụkpọ anụ, na-eme ka ọ bụrụ ọkụ, na-abịa n'ihu n'oge ọ bụla. A na-eji ụdị ihe ndị dị mkpụmkpụ na-emepụta ụdị ndị a karịsịa, karịsịa sheepskin, na nchịkọta nke ụdị ndị a ma ama, e nwere ọdịiche dịgasị iche iche. Ya mere, ọtụtụ nwa agbọghọ na-eto eto na-enwe mmasị na jaket akpụkpọ anụ na-acha ọcha na ajị anụ si ASOS.
Kedu ihe ị ga-eyi jaket akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ?
Ọ bụ ezie na ihe a na-ekpuchi ákwà bụ ihe dị iche iche ma jikọta ya na ihe ndị ọzọ, akpụkpọ ụkwụ na ngwa, ọtụtụ fashionistas nwere ajụjụ banyere ihe ga-eyi uwe oji akpụkpọ anụ nwa nwanyị n'oge oyi, oge okpomọkụ na nkeji oge. N'ezie, ụdị dịgasị iche iche nke ngwaahịa ndị a na-ahụkarị ebe ha na-eyi uwe ejiji nke ndị inyom nke oge a ma jikọta ha na akpa na uwe akwa, uwe na uwe, elk na jeggings.
Uwe na akwa jaket akpụkpọ anụ
Ụmụ agbọghọ ndị na-achọ ịdọrọ mmasị ga-adọrọ mmasị na-edepụta ihe oyiyi ụmụ nwanyị na akwa uwe akpụkpọ anụ na uwe dị iche iche, dịka ọmụmaatụ:
maka ijegharị na obodo ahụ, uwe mkpirikpi dị mkpirikpi na obere jaket-bombu zuru okè. Ndị a na-atụ anya ka ị gbakwunye eriri na akpa nke ezigbo akpụkpọ anụ na nwa ojii, akpụkpọ ụkwụ na ikpuchi akpụkpọ ụkwụ na perforations;
ndị na-egbuke egbuke na nke lyubitelnitsam na-egosi n'ebube ya nile ga-amasị ihe oyiyi dị mma, na-ejikarị uwe mgbakwasị ụkwụ kwesịrị ekwesị na obere jaket-kosuhi na-edozi ihe. Ọ bụrụ na atọrọ atụmatụ dị otú ahụ maka njem gaa na ụlọ ọrụ ahụ, ịnwere ike ịgbakwunye ya nkwụnye ọla edo, ogologo ntị ogologo na ntanaka ọtụtụ ogologo;
Maka uwe na-adị kwa ụbọchị, ụdị ejiji ejiji na ejiji dị mma. Akpụkpọ ụkwụ maka ihe ndị a eji ejiji akwa ka mma ịhọrọ oke ikiri ụkwụ - ọ pụrụ ịdị ka akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ, na akpụkpọ ụkwụ dị elu, akpụkpọ ụkwụ ụkwụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ;
Echefukwala uwe elu a na-ewu ewu na akwa uwe. Obere akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-ele anya na ha dị mma, karịsịa ma ọ bụrụ na e wuru onyinyo ahụ na nchikota dị iche iche nke na-acha uhie uhie. N'okwu a, ogologo ejiji na nke a nwere ike ịbụ ihe ọ bụla.
Jeans na akwa akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ
A na-eji ejiji akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ kachasị mma a na-ewu kwa ụbọchị n'ụdị jeans dị iche iche. Na-abịa na ọdịdị dịgasị iche nke uwe elu, ọ nwere ike ịbụ ihe ọ bụla jeans - warara ma ọ bụ ogologo, n'obosara ma ọ bụ ọkụ. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu banyere ịbịaru ihe oyiyi na-adabere na obere jaket, onye scoop, bọmbụ na ndị ọzọ na-ụdị-ụdị, nhọrọ nke jeans kwesịrị bịakwutere na ihe niile dị mkpa.
A na-eji obere jaket akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ na-acha akpụkpọ anụ kacha mma jikọtara ya na ọkpụkpụ mara mma nke nwere ọdịnala. Ihe nlereanya na ihe eji eme ihe ga-adaba n'ime oyiyi ahụ naanị ma ọ bụrụ na ụkwụ ya dị nso, na n'elu fashionista yi uwe. A naghị ekwe ka ọnụ ọgụgụ nke jeans na outerwear na-eme ka a na-ejikọta ya ọnụ, nke dị n'etiti ihe ndị a nke uwe ejiji ụmụ nwanyị na-agba ọtọ.
Na mgbakwunye, mgbe ị na-ahọrọ akpa akpa, ọ ga-eburu n'uche na ihe dị egwu ma ọ bụ motley n'ime ụdị ahụ nwere ike ịbụ otu. Ya mere, a na-ejikọta jaket n'elu n'elu na naanị ogologo ma ọ bụ jigide jeans, ma oke obosara ga-eme ka nke a na-enweghị ihe ọ bụla na-enweghị atụ. Ụkpụrụ yiri nke ahụ metụtara mpempe akwụkwọ na ihe ịchọ mma ndị ọzọ - ọ bụrụ na ndị na-akpa nwere uwe na-egbukepụ egbuke egbuke, ngwa ma ọ bụ ụkpụrụ, ha nwere ike na-eyi naanị na otu set nke nwere oke dị nkenke, ọ bụghị ihe eji achọ mma.
Akpụkpọ ụkwụ n'okpuru jaket akpụkpọ anụ
Ịchọta akpụkpọ ụkwụ kwesịrị ekwesị maka akwa akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ dị mfe. N'ihi ngosipụta nke ndò na-acha, ngwaahịa a jikọtara ya na ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ, akpụkpọ ụkwụ na ụdị akpụkpọ ụkwụ ndị ọzọ. Ka o sina dị, maka nhọrọ ndị ntorobịa karị, stylists na-atụ aro ịhọrọ ụdị dị iche iche ma ọ bụ ikpo okwu - n'ọnọdụ a, ụdị sneakers, snịịka, ihe ọkpụkpụ ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ga-adị mma.
A na-eji akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ kpochapụla, nke a na-eji mma akpụkpọ anụ, ọ dị mma ka akpụkpọ ụkwụ na ikiri ụkwụ, nke nwere ike ịbụ ma nke dị nro na nke mara mma, nke dị oke na anụ. N'oge oyi, akpụkpọ ụkwụ nwere nnukwu akpụkpọ ụkwụ, nke e ji ezigbo akpụkpọ anụ mee, dị mma maka ngwaahịa dị otú a, na oge oge oge - oge akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ nfuli.
Ncha na akwa akpa akpụkpọ anụ
Mmiri ọ bụla nke mmiri ma ọ bụ nke oyi na-eji akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ chọrọ ihe mgbakwunye na ụdị ịcha akwa ma ọ bụ palatine, ma ọ bụghị ya agwụcha. A na-ahọrọ ọtụtụ ụdị ụdị uwe ndị dị otú a, dị ka ejiji ma mee ka oyiyi ahụ dị arọ. Ka ọ dị ugbu a, ngwaahịa ndị na-agbanye ọnụ ala, na-eme ka olu dị elu, kama nke ahụ, a ga-ejikọta ya na nnukwu shawl ma ọ bụ jụọ. Dị ka a na-achị, a na-ahọrọ ákwà na-egbuke egbuke ma ọ bụ na-acha ọkụ maka ihe ndị dị mgbagwoju anya nke uwe elu, nke nwere ike ịmeghari oke oke na ọkwa.
Ka o sina dị, ndị dị otú ahụ na-achọ ka ọnụnọ nke onyinyo ndị yiri ya dị. Dịka ọmụmaatụ, ụfụ na-acha uhie uhie nwere ike ịzaghachi usoro ntutu ọnụ ya na akpa aka - ụzọ abụọ a dị nnọọ mma. Akpanyere anya na nhọrọ nke ihe eji eme ihe ma ọ bụrụ na nwanyị nke ejiji nyere mmasị ya na jaket na biker ma ọ bụ egwuregwu. Naanị monochrome ihe ma ọ bụ ụdị dị iche iche na-ebipụta ụdị dị na ngere ma ọ bụ eriri dị mma maka ụdị ndị ahụ.
Akpa isi na akwa akwa akpụkpọ anụ
Ebe ọ bụ na jaket akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ maka ụmụ agbọghọ nwere ike inwe ọtụtụ ụdị na ụdị dịgasị iche iche, a ga-ahọrọ isi ihe dị na ya, na-esi n'usoro ngwaahịa na ọdịdị ya. Ya mere, nhọrọ kacha mma maka uwe nkpuchi mkpụmkpụ ga-abụ okpu-earflap na mkpuchi mkpuchi, ọ bụghị ihe eji achọ mma. Ọ bụrụ na e nwere ntutu isi na uwe elu, ị nwere ike ịhọrọ okpu site na otu ihe ahụ ma ọ bụ jiri mkpịsị aka yiri ya.
Ụdị nke mink
Italian ala Jetetị Violanti
Akpụkpọ ụkwụ nke akpụkpọ anụ
Uwe ejiji ọhụrụ maka ndị na-eto eto
Akpụkpọ ụkwụ ballet nke ezigbo akpụkpọ anụ
Ụjọ maka zuru ezu
Ejiri uwe - mara mma na mma ụlọ
Jeans ebughi oke
Uwe akwa akpụkpọ ụkwụ - na ihe ị ga-eyi na otu esi emepụta ihe oyiyi ejiji?
Abdominoplasty of the stomach is a beautiful body in the shortest time possible
Na-alụso ọgba aghara n'ogige
Yeast achịcha na jam
Ọkpụkpụ ejiji - ụdị nke oge a nke 20-afọ
Egwuru akpa akwa maka ndị inyom dị ime
Nnukwu pancreatitis - ọgwụgwọ
Tomato na basil maka oyi - ntụziaka
Ihe Nlekọta Anya
Ọ bịarutere n'ikpeazụ, ma jidere onye ọ bụla! Eziokwu banyere onye mmeri nke "Eurovision 2017" Salvador Sobrile
Ucha ọcha maka ọ bụla uto - obere ma ọ bụ ogologo, mgbede ma ọ bụ nkịtị
Yoga maka zuru ezu
Ụkwara dị ogologo n'ime nwa na-enweghị ọkụ
Gwyneth Paltrow na-enye aka nyere Brad Pitt na Angelina Jolie aka site na ịgba alụkwaghịm
Kedu ihe ị ga-eji akwa coral?
Nwanyị kwụ n'ahịrị ndị inyom
Ulo elu na plastaboard na kichin
Madonna biara na njikwa dị ka onye mmanya na-egbu ihe ngosi foto
Ọnụ ọnụ diamond kasị ọnụ ahịa n'ụwa
Onyinye maka nwa agbọghọ ruo afọ 14
Eziokwu niile banyere Julia Wang